Xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud oo lagu dilay magaalada Garoowe.
Garoowe:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa sheegaya in saaka salaadii subax ka dib lagu dilay magaalada Garoowe Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka dowlada Puntland oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud kuna magacdheeraa (Sheebe).
Xildibaanka ayaa koox hubeysan ay ku toogteen xili uu ka soo baxay masaajid Al-Huda oo ku dhow gurigiisa waxaana isla markiiba goobta ka baxsaday dhagarqabayaashii dilka geystay. Kooxaha dilaya Masuuliinta iyo waxgaradka Puntland ayaa dilalkooda fuliya wakhtiyada laga soo baxo salaadaha Maqriba,Cishaha iyo Salaada subax ka dib ,taas oo dad badan ay is weydiinayaan ajandaha ka danbeeya dilalka noocaan oo kala ah .
Saraakiisha Puntland ayaa in badan ku eedeeyey dilalka ka dhaca Puntland in ay ka danbeeyaan Kooxda Al-Shabaab iyo kooxo kale oo lid ku ah nabada iyo harumarka Puntland. Ilaa haatan ma jiraan cid loo soo qabtay dilka Xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud kuna magacdheeraa (Sheyba) oo la dhashay gabayaagii caanka ahaa ee Khaliif Sheekh Maxmuud.
Ciidamada amaanka ee magaalada Garoowe ayaa dad badan u soo qabqabtay waxaana ay sheegeen in ay baaritaano ay wadaan.